Free na Easy Wireframing na Wireframe.cc | Martech Zone
Ma eleghị anya, anyị kwesịrị ịmalite na ihe wayaframing bụ! Ikuku bụ ụzọ ndị na-emepụta ngwa ngwa iji gosipụta ọkpụkpụ ọkpụkpụ na ibe. Ihe ntanetị na-egosipụta ihe ndị dị na ibe ahụ na mmekọrịta ha na ibe ha, ha anaghị egosipụta ezigbo eserese eserese webatara. Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ ime ka onye mmebe gị nwee obi ụtọ, nye ha waya waya nke arịrịọ gị!
Ndi bekee n’eji ihe nile site na pen na akwukwo, rue na Okwu Microsoft, rue elu imekọ ihe wayaframing ngwa iji hazie ma kekọrịta waya ha. Anyị na-ele anya maka nnukwu ngwaọrụ ọ dị ka onye nrụpụta anyị, Stephen Coley, chọtara nnukwu ihe pere mpe nke ejiri - Uzoamaka.cc
Wireframe.cc nwere atụmatụ ndị a
Pịa ma dọrọ ise - elementsmepụta ihe nke waya gị enweghị ike ịdị mfe. Ihe ị ga - eme bụ see rectangle na kwaaji ahụ wee họrọ ụdị stencil a ga - etinye ebe ahụ. I nwere ike ime nke ahụ site na ịdọrọ gị òké gafee kwaaji na-ahọpụta otu nhọrọ si a mmapụta menu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ idezi ihe ọbụla pịa ya ugboro abụọ.
Super-ntakiri interface - Kama imerime ogwe osisi na akara ngosi anyị niile mara site na ngwaọrụ na ngwa ndị ọzọ Wireframe.cc na-enye gburugburu ebe obibi na-enweghị ebe obibi. I nwere ike ilekwasị anya na echiche gị wee debe ha ngwa ngwa tupu ha adaa.
Jiri aka kọwaa ya - Ọ bụrụ n’ịchọrọ ijide n’aka na ozi gị gafere na ị nwere ike ịza ajụjụ mgbe niile na waya gị. A na-emepụta nkọwa n'otu ụzọ dị ka ihe ọ bụla ọzọ na kwaaji ahụ wee nwee ike gbanye ma gbanyụọ ya.
Obere palette - Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ka waya gị daa kọmpụta ma doo anya na ị ga-eme ka ọ dị mfe. Wireframe.cc nwere ike inyere gị aka iru nke ahụ site na ị nweta oke palette nke oke. Nke ahụ metụtara palette na-acha agba na ọnụọgụ nke stensị ị nwere ike ịhọrọ. Wayzọ a kachasị mkpa nke echiche gị agaghị efu na ihe ịchọ mma na-enweghị isi na ụdị ejiji dị mma. Kama nke ahụ, ị ​​ga - enweta waya na nghọta nke eserese ejiri aka mee.
Ndụmọdụ Smart - Uzoamaka.cc na-agba mbọ ịkọ ihe ịchọrọ ị sere. Ọ bụrụ na ịmalite ịbịaru mbara na mkpa gị, o yikarịrị ka ọ ga - abụ isiokwu karịa ogwe igwe kwụ ọtọ ma ọ bụ gburugburu. Otu ihe a na - edezi - a na - ewetara gị naanị nhọrọ nwere ike ịdaba maka ihe enyere. Nke ahụ pụtara akara ngosi dị iche iche na ogwe ngwaọrụ maka idezi paragraf na iche maka rektangulu dị mfe.
Ebe nrụọrụ weebụ Wireframe na ngwa ngwa ekwentị - nwere ike ịhọrọ site na ndebiri abụọ: windo nchọgharị na ekwentị mkpanaaka. Dị mkpanaka ahụ na-abịa na nhazi ihu na ihu igwe. Ka ịgbanwee n'etiti ndebiri ị nwere ike iji akara ngosi dị n'akụkụ aka ekpe aka ekpe ma ọ bụ naanị megharịa kwaaji ahụ site na iji njikwa na ala aka nri ya.
Mfe ịkọrọ ma gbanwee - Ihe ntanetị ọ bụla ịchekwara na-enweta URL pụrụ iche ị nwere ike ibe edokọbara ma ọ bụ kesaa. Ga-enwe ike ịmaliteghachi ọrụ na imewe gị oge ọ bụla n'ọdịnihu. Enwere ike dezie ihe niile gbasara gị waya waya ma ọ bụ tụgharịa ghọọ ihe ọzọ (dịka otu igbe nwere ike ịbụ paragraf).
Tags: saasweb imewengwá ọrụ weebụwayawireframe ngwaọrụwayaframingwayaframing ngwaọrụ